अष्टलक्ष्मी शाक्य आक्रोसित बनेपछि मौन बन्यो एमाले स्थायी कमिटी बैठक – YesKathmandu.com
काठमाडौं । ‘पार्टी जीवनमा तपाईको जति योगदान छ, त्यति मेरो पनि छ । तपाई अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ म उपाध्यक्ष छु । तर तपाई अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी चलाउँदै हुनुहुन्न । गुट चलाईरहनु भएको छ । गुटमात्रै चलाउने हो कि पार्टी चलाउने हो त्यो तपाईले आज प्रष्ट पार्नु पर्दछ’, आइतवार एमाले स्थायी कमिटीको बैठकमा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले अध्यक्ष केपी ओली माथी प्रहार गरेका शब्द हुन् यी ।
प्रदेश नम्वर ३ को संसदीय दलमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले प्रत्येक सांसदलाई टेलिफान गरी आफुलाई हराएको भन्दै उपाध्यक्ष शाक्यले स्थायी कमिटी बैठकमा आक्रोस पोखेकी थिइन । ‘तपाई सधै समानता र न्यायका कुरा गर्नुहुन्छ तर गुटका नाममा अत्याचार पनि गर्दै हुनुहुन्छ’, बैठकमा शाक्यले भनिन् । शाक्य आक्रोसित भएपछि बैठकमा रहेका सवै नेताहरु केही समय मौन बसेको स्रोतले बताएको छ ।
केही समयपछि अध्यक्ष ओलीले शाक्यलाई सम्झाउँदै निर्वाचनमा नजान आफुले सुझाव दिएको बताएका थिए । ‘मैले तपाईलाई निवासमै बोलाएर निर्वाचनमा नजानोस भनेको थिए, तपाईले मान्नु भएन’, ओलीले नरम शब्दमा जवाफ दिएका थिए । ओलीको जवाफपछि माधव नेपाल समुहका नेताहरुले अध्यक्ष हैसियतमा पार्टी भन्दा गुट चलाएको आरोप लगाएका थिए । अन्य स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई कडा जवाफ दिएपनि शाक्यसँग भने ओली नरमरुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
आइतवार समानुपातिक सांसदको सूची अनुमोदन गर्न एमाले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको थियो । शनिवार ओली निवास बालकोटमा बोलाइएको बैठकमा नेपाल पक्षधर नेताहरुले उपस्थित नहुने जनाएपछि आइतवार पार्टी मुख्यालय धुम्वाराहीमा बैठक बसेको थियो ।
बैठकमा शाक्यले कडा शब्दमा अध्यक्षको आलोचना गरेपछि नेता माधव नेपाल बीचमै उठेर हिडेका थिए । उनले बैठकमा कुनैपनि शब्द नवोलेको स्रोतले बताएको छ ।
One thought on “अष्टलक्ष्मी शाक्य आक्रोसित बनेपछि मौन बन्यो एमाले स्थायी कमिटी बैठक”
इन्द्रबहादुर रावल says:
गरिमा मेडम तपाईं कसैको पक्षमा अन्याय भएको कुरा बोलिरहदा म आफू कति पानीमा छु भन्ने कुरा थाह पाउनु राम्रो होला । बिगतका दिनमा हाम्रो पार्टी लाई तेस्रो लिंगी भन्न पनि भ्याए, त्यस्तो किन भएको हो त भन्दा नेतृत्वको ढुलमुले नितीका कारण । आज एमाले माहुरी को रानी जस्तै भएको छ त्यो नेतृत्व कै कारण भएको कुरा जगजाहेर छ। तपाईं पार्टीको केन्द्रिय सदस्य कति रोइलो गरि रहनु भएको छ? पार्टी अध्यक्षले तपाईं नलडनुस भन्दा जबर्जस्ति लडन जाने दोष जति पार्टी अध्यक्ष लाई दिने? लडेपछी हारजित स्वीकार नगर्ने? विधि र बिधान अनुसार सबै जान सक्नु पर्‍यो। आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा हार जित भएको कुरालाई तपाईंले निरन्तर पार्टी नेतृत्वको बिरुद्धमा फेसबुकमा पोस्ट कमेन्ट गरीरहनु भएको छ। यो अनुशासन भित्र पर्छ कि पर्दैन ? कि त तपाईं लाई अनुशासन लाग्दैन? धेरै रोइलो गर्नुको केहि अर्थ छैन ।
वामपन्थी सरकारलाई त्यहीअनुसारको व्यवहार गर्न प्रहरीलाईओलीको सुझाव